अन्ततः जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो…. « Etajakhabar
‘डबल म्युटेसन पुष्टि भएको नमुना ललितपुर जिल्लाको हो,’ डा. पौडेलले भने, ‘यसबाट पनि नेपालमा यूके भेरियन्ट फैलिसकेको पुष्टि हुन्छ ।’ बुधबार नै देशभर ६ सय ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार ५ सय ८० जना पीसीआर र २३ जना एन्टिजेन पोजेटिभ आएको हो । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।